Immisa ayuu ka qaataa naqshadeeyaha garaafiga ee Spain | Hal-abuurka khadka tooska ah
Ma jeceshahay sawirista, farshaxanka, horumarinta aqoonsiga? Ma waxaad tahay qof hal abuur leh, ma ku xeel dheer shaqadaada oo ma jeceshahay inaad ku soo biirto isbeddellada cusub ee naqshadeynta? Haddii aad waxaas oo dhan kaga jawaabtay haa, Inaad noqoto naqshadeeye garaafeed waa waddadaada saxda ah.
Ahaanshaha naqshadeeye garaafeed wuxuu noqon karaa a doorasho shaqo aad u wanaagsan, maadaama hal-abuurkaaga aad ku gudbin karto fikrado iyo fariimo hal-abuurkaaga.
Gelitaanka adduunka naqshadeynta waxay kuxirantahay wax badan tabobar, adkaysi iyo ku jir cusboonaysiinta aqoonta joogtada ah, maadaama ay tahay adduun is-beddel joogto ah oo aad loo tartamayo. Waa inaad ka dhexmuuqataa oo aad uga dhexmuuqataa tartamayaashaada si aad u hesho fursadaha shaqo ee ugu wanaagsan ee laguu soo bandhigo.
Maqaalkan waxaan dooneynaa inaan soo ridno qodobo kala duwan oo tixraacaya adduunka naqshadeynta; si ay u bartaan, fursadaha xirfadeed iyo mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan, Immisa ayuu qaataa naqshadeeyaha garaafyada gudaha Spain?
1 Maxaad u baahan tahay inaad barato si aad u noqoto naqshadeeye garaafeed?
2 Dibad baxyo xirfadeed
3 Immisa ayuu qaataa naqshadeeyaha garaafyada gudaha Spain?
4 Immisa ayuu sameeyaa nashqadeeyaha garaafyada madaxa-bannaan?
Maxaad u baahan tahay inaad barato si aad u noqoto naqshadeeye garaafeed?
Haddii yoolkaagu yahay inaad noqoto naqshadeeye garaaf, waa inaad ku bilowdaa barashada a Shahaadada Naqshadeynta Sawirka. Ma aha adoon marka hore baran baccalaureate fanka ama aan la xiriirin aduunkan, ha ahaato koorsooyin, dugsiyo ama waxqabadyo la xidhiidha.
Gudaha Degree in Graphic Design waxaan ku kala saari karnaa laamo kala duwan iyadoo ku xiran maadooyinka la doortay ama xitaa jaamacadaha qaarkood shahaadooyinka gaarka ah sida moodada, gudaha, naqshadeynta, naqshadeynta alaabta, iwm.
La warqad maxkamadeed si aad u gasho shahaadooyinkan jaamacadeed Waxay ku xirnaan doontaa jaamacadda aad rabto inaad gasho iyo nooca shahaadada, la mid ma noqon doonto shahaadada naqshadeynta sida shahaadada naqshadeynta moodada.
Dhanka kale, haddii aadan heli karin ama aadan xiiseyneynin inaad sameyso shahaado jaamacadeed, waxaa jira fursado dhowr ah oo aad naftaada u hurto naqshadeynta. Waad gali kartaa darajooyin kala duwan oo dhexe ama sare kuwa dunidan la xidhiidha ama xitaa tababar adiga kuu gaar ah iyada oo loo marayo koorsooyin ama casharro laakiin mar walba niyadda ku hay in habka dambe ay aad u adkaan karto helitaanka nidaamka shaqada iyada oo aan la marin tababar shaqo sida ay bixiyaan daraasado kale.
Dibad baxyo xirfadeed
Barashada naqshadeynta garaafyada waxay kuu ogolaaneysaa inaad lahaato muuqaal cilmiyeedyo badan oo sidaas darteed awood u leh inuu ka shaqeeyo qaybo kala duwan. Mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee naqshadeeyayaasha waxay la xiriirtaa horumarinta aqoonsiga shirkadaha, ololayaasha isgaarsiinta, horumarinta qalabka waraaqaha, iwm. Ma aha oo kaliya kor u qaadista a image image oo illow, laakiin waxay ka kooban tahay wax badan oo dheeraad ah sida daraasadda tartanka, midabka, qoraalka qoraalka, taageeridda halka laga isticmaalo, qaybinta, iwm.)
Naqshadeynta bogagga shabakadda, waa aag in badan oo ka mid ah naqshadeeyayaasha garaafyada lagu arko, laakiin tan waxay u baahan yihiin tababar SEO ah, aqoonta shabakada, koodhka kumbuyuutarka ...
La Shaqo bixinta guryaha madbacaddu aad bay u ballaadhan tahay naqshadeeyayaasha garaafyada, waxay mas'uul ka yihiin qaabeynta, naqshadaynta daboolida iyo macluumaadka macluumaadka waxaanan xitaa arki karnaa iyaga oo abuuraya majaajillo ama buugaag carruureed iyadoo ay ugu mahadcelinayaan aqoontooda sawirka.
Laba hawlood oo kale oo aasaasi ah oo naqshadeeyayaasha garaafyada ayaa ah naqshadeynta baakadaha iyo horumarinta ciyaaraha fiidiyowga.
Immisa ayuu qaataa naqshadeeyaha garaafyada gudaha Spain?
Sidaan horey u soo sheegnay naqshadeeye garaafiga wuxuu leeyahay a muuqaal aad u kala duwan, waxa uu noqon karaa meelo badan oo nakhshad ah. Iyadoo ku xiran aagga aad ku sugan tahay, waxaad heli doontaa hal ama mid kale, maanta mid ka mid ah lacagta ugu fiican waa aagga dhijitaalka ah.
Nooca shirkadda aad ka shaqeyso sidoo kale waa muhiim, istuudiyo yar ama qaybta naqshadeynta ee shirkad weyn oo bixin karta mushahar wanaagsan.
Si loo helo suurtogalnimada in lagu helo mushahar wanaagsan ama lagu shaqaaleysiiyo wakaalad weyn oo xayaysiis, naqshadeeyaha garaafyada waa inuu samee niche, magac qaybtaTaas waxaa lagu gaaraa shaqo joogto ah.
Suurtagalnimada kale ayaa ah in naqshadeeyaha garaafyada uu go'aansado inuu keligiis u shaqeeyo, kaas oo loo yaqaan banaan. Xaaladdan oo kale, waa naqshadeeyaha laftiisa kan sameeya go'aannada si loo dhiso heerarkiisa, saacadaha shaqada iyo macaamiisha cidda ay la shaqeeyaan.
Ku soo noqoshada mawduuca, imisa ayuu qaataa naqshadeeyaha garaafka ee Spain, tirooyinka ayaa u dhexeeya 1500 iyo 1800 euro bishii. Haddii aan ka hadalno naqshadeeyaha bilaabay inuu ka shaqeeyo internship, waxaan ka hadlaynaa 500-950 euro bishii iyo naqshadeeye sare oo u dhexeeya 2500 iyo ku dhawaad ​​3000.
Isla marka uu naqshadeeyaha garaafku dhammeeyo muddada tababarka, isaga ama iyada waxaa laga yaabaa in ay shaqaaleysiiso shirkadii uu ku sameeyay tababarka. Mushaharku wuxuu la mid yahay ama ka sarreeyaa mushaharka ugu yar ee isbaanishka isdhexgalka ee ay daabacdo BOE, sanadkan wuxuu ka kacay 980 euro ilaa kun.
Liiska soo socdaa wuxuu muujinayaa qiyaasta mushaharka sannadkii, oo loo qaybiyay 14 lacag-bixineed, oo naqshadeeyuhu uu heli karo isagoo ku saleysan khibradda shaqo ee uu leeyahay.
Laga bilaabo 0 ilaa 2 sano oo waayo-aragnimo ah: mushahar sanadle ah oo ah 14000 euro
Laga bilaabo 2 ilaa 5 sano oo waayo-aragnimo ah: mushahar sanadle ah oo ah 18620 euro
Laga bilaabo 5 ilaa 10 sano oo waayo-aragnimo ah: mushahar sanadle ah oo ah 27.395.9 euro
Laga bilaabo 10 ilaa 15 sano oo waayo-aragnimo ah: mushahar sanadle ah oo ah 33320 euro
Laga bilaabo 15 ilaa 20 sano oo waayo-aragnimo ah: mushahar sanadle ah oo ah 36400 euro
In ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo ah: mushahar sanadle ah oo ah 39340 euro
mar walba maskaxda ku hay tartanka weyn ee ka jira qaybtan maxaa sababa in mushaharka la dhimo.
Immisa ayuu sameeyaa nashqadeeyaha garaafyada madaxa-bannaan?
Hadii ay dhacdo in aad ku fikirayso in aad ku dhex milmi karto aduunka naqshadaynta garaafka sida Madax-bannaanida waxaad ku dallaci kartaa saacadaha shaqada ama mashruuc, sidaad u calaamadinayso. Waxaad u shaqayn kartaa wakaaladaha naqshadaynta, xayaysiinta, daabacayaasha, iwm.
Liistada soo socota waxaan ku tusineynaa waxa uu naqshadeeye garaafyada madax-bannaani ku codsan karo shaqadooda:
Naqshadaynta boodhka: 250 euro
Naqshadaynta buug-yaraha ama xaashida: ilaa 100 euro
Naqshadeynta buug-gacmeedka aqoonsiga shirkadda: laga bilaabo 130 ilaa 250 euro
Naqshadaynta magaca: 650 euro
Naqshadaynta xayeysiinta: 450 euro
Naqshad Vinyl: ilaa 250 euro
Naqshad baakad: 500 euro
Naqshadaynta astaanta iyo sawirka shirkadda: 390 euro xidhmo aasaasi ah, oo gaadhay ilaa 1000 yuuro inta ugu dhammaystiran
Naqshadaynta bogga aasaasiga ah: 450 euro
Naqshadaynta bogga gaarka ah: laga bilaabo 800 euro
Saacaddiiba waxa shaqeeya naqshadeeye madax-bannaani wuxuu dalaci karaa ku dhawaad ​​50 yuuro, qaar baa la bixiyaa xirmooyinka saacadaha; tusaale ahaan 10 saacadood oo shaqo ah 400 euro.
Ma xiisaynaysaa inaad noqoto naqshadeeye garaafeed? Hagaag, sidaan horay kuugula talinay. waxa ugu wayn waa in aad tababarto, iyadoo ku xiran aqoonta ama meesha aad ka timid dhinaca waxbarashada. Ka fakar oo ku takhasusay laanta aad sida ugu badan u jeceshahay, oo inta badan soo jiidata dareenkaaga oo aad ku gaadhi doonto fursado badan oo aad ku heli karto shaqo tayo leh iyo hadba heerkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Immisa ayuu qaataa naqshadeeyaha garaafiga ee Spain
Wali waan ku qoslayaa mushaharadan aad dhigato